Kasị Bike Enyi na Enyi Ọnọdụ Na Europe na otú Nweta E | Save A Train
Home > Travel Europe > Kasị Bike Enyi na Enyi Ọnọdụ Na Europe na otú Nweta E
Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Denmark, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 27/12/2019)
Ọ bụrụ na ị ogologo ịhụ ụfọdụ nke Europe ga-gaa na ebe, a ole na ole n'ime ihe ndị kasị bike friendly obodo ga-eme ka gị na ndepụta. Obodo ndị a dị ukwuu, inyocha site bike, na-eme ka ha mma n'ihi na ejegharị ejegharị na a mmefu ego. Na i nwere ike inwe na e jiri ụgbọ okporo ígwè. Lee ndị iri kasị bike friendly obodo na Europe:
1. Bike-Enyi na Enyi Amsterdam, Netherlands
Amsterdam ka anọgide na-n'etiti ndị kasị bike friendly obodo na Europe. Ọ iche okirikiri tracks kama Lanes, ikwe gị gaa n'ebe nile ụgbọ ala-free. Ị nwere ike mfe iru ya site okporo ígwè site Paris, Brussels, Copenhagen na ndị ọzọ isi European ebe.
2. Bike-Enyi na Enyi Copenhagen, Denmark
Copenhagen nyekwara n'elu € 134 nde n'ime-emepe emepe ya ịgba ígwè netwọk ihe karịrị afọ. Nke so kpata eme ha okirikiri ụzọ netwọk nnukwu na ulo oru Copenhagen na-n'etiti ndị greenest European ebe.
Hamburg na Copenhagen Ụgbọ oloko
3. Bike-Enyi na Enyi Berlin, Germany
Berlin nwere naru ka ha ghọọ otu n'ime ndị kasị bike friendly obodo Europe maka a mgbe. Ha mesịrị mee ka ọ, ekele na-esi ọtụtụ mkpọsa nke ịgba ígwè obodo. Dị ka otu n'ime n'ógbè nlekọta ọrụ nke European ụgbọ okporo okporo ụzọ, Berlin bụ nnọọ mfe iji.
Obodo na Netherlands n'anya ịnyịnya ígwè ha. Utrecht invests a ọtụtụ n'ime ya ịnyịnya ígwè akụrụngwa. Long ígwè n'okporo ámá na nnukwu na-adọba ụgbọala ụlọ ọrụ ime ka ọ dị mfe iji anyịnya igwe e.
Brussels na Utrecht Ụgbọ oloko
Berlin na Utrecht Ụgbọ oloko
Paris na Utrecht Ụgbọ oloko
Antwerp bụ Belgium kasị bike friendly obodo, na a mepụtara netwọk nke ịgba ígwè ụzọ. Na nnukwu Ngo iji na rụọ ọrụ na ya n'ihu, Antwerp ga-anọ n'etiti n'elu ịgba ígwè aga Europe.
Vienna obụrede mbụre mmejuputa Europe mbụ ibu bike mgbazinye usoro. Tinyere ihe ndị ọzọ, atumatu na obodo n'ụba nkwado mee Vienna ọzọ bike-enyi na enyi na-ewu 1300-km nke okirikiri ụzọ netwọk.
Basel si mara ihe ole na ole, na ịbụ bike-enyi na enyi bụ otu n'ime ha. Na nke ọ bụla ihu igwe ma oge, ị pụrụ ịhụ ndị bi na Basel eji ịnyịnya ígwè ha ịnyagharịa gburugburu mfe. Ị nwere ike iru Basel si Amsterdam ụgbọ okporo ígwè na-.
n'etiti Germany kasị bike friendly obodo, Munster-eme a anọgide ọma ogo. The obodo na-arụ ọrụ ike iji hụ na-agba ígwè na-enwe obi ụtọ na ya ịgba ígwè akụrụngwa na nchekwa.
Essen na Munster Ụgbọ oloko
Bielefeld ka Munster Ụgbọ oloko
Cologne ka Munster Ụgbọ oloko
Hanover na Munster Ụgbọ oloko
Italian obodo na-emekarị na-adịghị n'etiti ndị kasị bike friendly obodo na Europe, ma Verona anọchi nnọọ nke ọma. Ọ bụ oké obodo inyocha ịnyịnya ígwè, na ụgbọ okporo ígwè si Rome ka Verona naanị-agbakwụnye, ka ịma mma nke gị njem.
Rimini ka Verona Ụgbọ oloko
Rome ka Verona Ụgbọ oloko
Florence na Verona Ụgbọ oloko
Venice na Verona Ụgbọ oloko
Munich nwere a doro anya-eme atụmatụ iwu a nke ukwu ígwè netwọk mpaghara ma melite ịgba ígwè akụrụngwa. The mgbaru ọsọ kasịnụ bụ iru 30% modal òkè maka anyịnya igwe. Ọ bụrụ na ị chọrọ na-agbalị si na-gburugburu Munich na a bike, ị nwere ike njem e ụgbọ okporo ígwè si Berlin, Vienna, na Zurich, n'etiti obodo ndị ọzọ.
Ị dị njikere iji kwụọ ụgwọ a nleta ụfọdụ nke Europe ji mma ebe eji naanị gị ịnyịnya ígwè na ụgbọ okporo ígwè? Jikere maka njem nke a ndụ, na akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè n'oge!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-bike-friendly-cities%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Train Travel The Netherlands, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe